horumarinta suuqa Cryptocurrency in 2018 - Blockchain News
horumarinta suuqa Cryptocurrency in 2018
Sababo la bilaabay ee mustaqbalka Seeraar iyo taagayo ku saabsan is-weydaarsiga stock dhaqanka; Oogidda badan a 100 lacag deyr in ganacsan cryptocurrencies; iyo xarfo suuqa cryptocurrency gaarey in ka badan $500 bilyan 2017, khubaro dhabbuu u aaminsan yihiin in cryptomarket hadda waxa uu noqday koraya ugu dhaqsiyaha badan iyo warshadaha ugu of our Qarni. Waxaan soo ururiyo fikradaha iyo saadaasha khubaro iyo ciyaartoyda warshadaha muhiim ah oo ku saabsan horumarinta suuqa cryptocurrency in 2018.
The CEO of Node40, Shirkadda maamul blockchain iyo waafaqsanaanta canshuurta cryptocurrency a, Perry Woodin ayaa aaminsan in 2018 noqon doonaa sannadda wacyiga dadweynaha mass for cryptocurrency.
Waxaa ay noqon doontaa sanadka marka saaxiib kasta oo qaraabo u baahan doontaa in aad ogaato inta aad leedahay iyo sida loo iibsato, ayaa sheegay in Woodin.
Shaki kuma jiro waxaa jiri doona u kaca ee tirada dadka isticmaalaya cryptocurrencies. Jonathan Sela, horumarinta ganacsiga SVP jeesada by YouNow, kaas oo isticmaala blockchain si loo dhiso hannaanka warbaahinta a, qiyaastay in dhamaadka 2018, waan arki doonaa in ka badan 50 milyan oo qof oo dunida haysta ugu yaraan hal cryptocurrency. Inkasta oo cilmi-baaris cusub oo ay Block London ee Exchange (LBX) ayaa soo gabagabeeyey in dhamaadka 2018 mid ka mid ah saddex millennials maal-geli doonin suuqa crypto.
Go'aanka is dhaafsi stock dhaqanka CBOE iyo CME inay taxaan Seeraar mustaqbalkooda iyo fursadaha qandaraasyada ka dhigay cryptocurrency koowaad ee dunida iyo, u badan tahay in ugu dhakhsaha badan, cryptocurrencies kale, class hanti cusub la mid ah macdanaha qaaliga ah, ilaha tamarta, bonds dowladda, iyo alaab kale oo badan oo securities. Sayidka, sannadka soo socda booska uu ka cryptocurrencies doonaan sharci ah in nidaamka maaliyadeed iyo sharciyeed ee hadda jira. Simon Yu, CEO of StormX, saamiyada bayaankan. Isagu waa hubiyo in 2018 waxay noqon doontaa mid ka mid ah sano ee ugu fiican ee cryptocurrency iyo riixdo suuqa si heer cusub.
Ilaa iyo hadda waxa ay ahayd maal-ugu horrayn tafaariiqda riixaya qiimaha Seeraar iyo cryptocurrencies kale. Iyadoo suuqa mustaqbalkooda iyo fursadaha si loo yareeyo khatarta profile, maal hay'adaha more dambeyntii awood u yeelan doonaan in ay bilaabaan booda ee. Laakiin alaabtii dhaqaale, waxaan arki karin trillions dollar socodka lacag hay'adaha ee shantii sano ee soo socda.
Shidan Gouran, Madaxweynaha Global Blockchain Technologies, ayaa shaki ku jirin in cryptocurrency arki doonaa guulaha ka sii weyn soo bidhaamayaan in 2018.
“Iyada oo boqolkiiba weyn ee dadka macaamiisha la mid isticmaalaya ama, ugu yaraan, raaxo leh cryptocurrencies, isla aan weli la odhan karaa dawladaha iyo hay'adaha. Tani waa wax la filayay, sida ururada, labada dadweynaha iyo kuwa gaarka, u muuqdaan in ay leeyihiin gooladaha waxbarashada dambe ee dhaqmaadka teknoolajiyada cusub. Waxaan dareemi in qalooca waxbarashada tani waxay noqon doontaa barta focal of cryptocurrency iyo blockchain horumarka 2018, gudbid badan oo caqabad ku ah in ay ka horjoogsadeen ka qaybgalka dadweynaha iyo hay'adaha ee ka howgala this. Tani qof walba u keeni doonaa gal bogga isku, aad bay u kobciya iman kara tiknolojiyada, kuwaas oo qayb ka mid ah hay'adaha wax raadayn, furayay ka shaqeynayaan in aan noqon doono suurto gal ah haddii kale. Inta u dhaxaysa maalgashiga hay'adaha sii cryptocurrencies, qurbaankii mustaqbalkooda Seeraar ku salaysan, iyo dawladaha uu bilaabay in uu shaqeeyo mashaariicda blockchain iyaga u gaar ah, waxaa hore u calaamadaha teknoolajiyada kuwaas qaadaan on heerarka dadweynaha iyo hay'adaha. Anaga, Sidaa darteed, saadaaliyo in 2018 arki doonaa koritaanka joogto ah iyo ku dhaqanka, dhismaha horumarka hadda jira taariikhda soo dhaweeyo daneeyayaasha cusub”.
Sida laga soo xigtay agaasimaha guud ee Biddable Mark Lurie, maal badan diiradda saaraan cryptocurrencies kale, oo ay ku jiraan litecoin, dumisaan, oo xaraf, halkii Seeraar ama ether. Lurie ayaa aaminsan in la maalgashado, in 2018, waxaa ay noqon doontaa riix xoog leh xagga kala duwan cryptoassets iyo maamulka maalgelinta crypto loola dhaqmi doonaa jidka maal-eegto hantida dhaqanka iyo la maalgashado.
Mike dogob, CEO of Company Crypto ah, xusay in Degenaansho yar Seeraar saameyn ku lahaa cryptocurrencies kale iyo waxaan sidoo kale arki lahaa kaca ee calaamadihii securities. Waxa uu saadaaliyay cap suuqa of a $5 trillion dhamaadka sanadka.
dmitriy Zhulin, Co-aasaha ee INS deegaanka, filaysaa in sida technology blockchain sii wadaan in ay qaabeeyaan, Seeraar kor u soo bixi doona ku dhowaad $30-40,000 in 2018 ku salaysan ay habboonaan iyo ansaxinta dheeraad ah iyada oo loo adeegsanayo bixinta iyo caasimada ilaalinta. Waxaa intaa dheer, Trevor Koverko, Madaxweynaha Polymath shirkad Canada, ayaa aaminsan in Seeraar doonaan sida network lacag.
“Currently Seeraar loo isticmaalay sidii hanti kuteen iyo dukaan oo qiimo leh. Laakiin sida qaadista xal sida network Hillaaca ah ( network-ku salaysan Seeraar, u ogolaanaya dadka isticmaala si ay u sameeyaan tiro aan xad of micropayments - DeCenter), utility Seeraar ayaa si weyn loo kordhiyo oo ay la socdaan ay qiimaha. Su'aashu waxay tahay waxa ay noqon doontaa Seeraar 'silsilad ugu weyn’ in uu leeyahay geesinimada in ay qaataan casriyaynta ama waxa ay noqon doontaa silsilad kale sida Seeraar Cash?”
horumarinta suuqa Cryptocurrency
7 Best Tababarka Horumarinta Blockchain, Koorsooyinka iyo Shahaadda
Waxa aan ognahay in ku saabsan Cryptocurrency Gram iyo telegraam ICO
telegraam ICO Telegr ...
Daah-of LitePay ma ay qaadan meel on maalinta magacaabay
Daah-ka-pa ah ...
arrimaha New York cryp ...
Post Next:Sidee technology blockchain horumarinta ee 2018?